China High pressure mmiri alụlụ usoro-FM Kwadooro (1) ụlọ ọrụ na ndị na - eweta ya Anbesec
High mgbali mmiri alụlụ usoro-FM Kwadoo (1)
A kọwapụtara igwe mmiri na NFPA 750 dị ka ihe ịgba mmiri nke Dv0.99 maka ya, maka nkesa oke mmiri nke mmiri mmiri, ihe na-erughị 1000 microns na nrụgide arụmọrụ kacha nta nke ikuku mmiri. Usoro ikuku mmiri na-arụ ọrụ na nrụgide dị elu iji nyefee mmiri dị ka igwe ikuku ọma. Alụlụ a na-eme ngwa ngwa ghọọ steam nke na-agbanye ọkụ ma gbochie ikuku oxygen ịbịaru ya. N'otu oge ahụ, evaporation na-emepụta mmetụta dị jụụ dị mkpa.
Mkpụrụ Mist Water
ee Akọwapụta igwe mmiri na NFPA 750 dị ka ihe ịgba mmiri nke Dv0.99, maka nkesa mmiri na-ekesa nke na-enye mmiri mmiri, ihe na-erughị 1000 microns na nrụgide arụmọrụ kachasị dị ntakịrị nke ikuku mmiri. Usoro ikuku mmiri na-arụ ọrụ na nrụgide dị elu iji nyefee mmiri dị ka igwe ikuku ọma. Alụlụ a na-eme ngwa ngwa ghọọ steam nke na-agbanye ọkụ ma gbochie ikuku oxygen ịbịaru ya. N'otu oge ahụ, evaporation na-emepụta mmetụta dị jụụ dị mkpa.
Mmiri nwere ihe magburu onwe ya nke na-ekpo ọkụ ọkụ 378 KJ / Kg. na 2257 KJ / Kg. iji tọghata uzuoku, gbakwunye ihe dị ka 1700: 1 mmeba na ime nke a. Iji jiri ihe ndị a mee ihe, a ghaghị ime ka elu mmiri nke ụmụ irighiri mmiri rụọ ọrụ nke ọma ma mee ka oge agafe ha (tupu ịkụ ala) abawanye. N'ime ime nke a, enwere ike ịmechi ọkụ ọkụ nke ọkụ na-enwu enwu site na njikọta
1. Nwepu ọkụ site na ọkụ na mmanụ ọkụ
2. Oxygen Mbelata site uzuoku smothering na ire ọkụ n'ihu
3. Na-egbochi ikpo ọkụ ọkụ
4. Jụrụ nke gas combustion
Maka ọkụ iji dịrị ndụ, ọ na-adabere na ọnụnọ nke ihe atọ nke 'triangle ọkụ': oxygen, okpomọkụ na ihe ọkụ ọkụ. Iwepu nke ọ bụla n’ime ihe ndị a ga-emenyụ ọkụ. Sistemụ alụlụ mmiri dị elu na-aga n'ihu. Ọ na-awakpo ihe abụọ nke triangle ọkụ: oxygen na okpomọkụ.
Obere ụmụ irighiri mmiri dị na sistemụ mmiri na-eme ka mmiri sie ike ngwa ngwa na ụmụ irighiri mmiri na-ekpochapụ ma gbanwee site na mmiri gaa na uzuoku, n'ihi oke elu nke metụtara obere mmiri. Nke a pụtara na ụmụ irighiri mmiri ọ bụla ga-agbasa ihe dịka oge 1700, mgbe ịbịaru nso na ihe a na-ere ọkụ, nke ga-eme ka ikuku oxygen na gass gas si na ọkụ, nke pụtara na usoro ọkụ ahụ agaghị enwe oxygen.
Iji lụso ọkụ ọgụ, sistemụ ifesa ọdịnala na-agbasa ụmụ irighiri mmiri n’elu mpaghara e nyere, nke na-amịkọrọ okpomọkụ iji mee ka ụlọ ahụ jụrụ oyi. N'ihi oke ha dị ntakịrị na obere ntakịrị, akụkụ bụ isi nke ụmụ irighiri mmiri agaghị enweta ume zuru ezu iji kupụ, ha na-ada ngwa ngwa daa n'ala dị ka mmiri. Nsonaazụ bụ obere mmetụta jụrụ oyi.
N’aka nke ọzọ, alụlụ mmiri nke nwere mmiri dị elu nwere obere ụmụ irighiri mmiri, nke na-ada nwayọ nwayọ. Mmiri irighiri mmiri mmiri nwere nnukwu akụkụ metụtara ala ha, ma n'oge ha na-arị nwayọ nwayọ na ala, ha na-enwetakwu ume. Nnukwu mmiri ga-esoro eriri saturation wee pụọ, nke pụtara na ikuku mmiri na-etinye ike karịa site na gburugburu ma si otú a bụrụ ọkụ.
Ọ bụ ya mere ikuku mmiri dị elu ji eme ka mmiri dị jụụ karịa kwa mmiri: ihe ruru okpukpu asaa ka mma karịa ka a ga-enweta otu lita mmiri eji sistemụ ọdịnala.
Akọwapụta igwe mmiri na NFPA 750 dị ka ihe ịgba mmiri nke Dv0.99, maka nkesa mmiri na-ekesa nke na-enye mmiri mmiri, ihe na-erughị 1000 microns na nrụgide arụmọrụ kachasị dị ntakịrị nke ikuku mmiri. Usoro ikuku mmiri na-arụ ọrụ na nrụgide dị elu iji nyefee mmiri dị ka igwe ikuku ọma. Alụlụ a na-eme ngwa ngwa ghọọ steam nke na-agbanye ọkụ ma gbochie ikuku oxygen ịbịaru ya. N'otu oge ahụ, evaporation na-emepụta mmetụta dị jụụ dị mkpa.
1.3 Nnukwu Nsogbu Mmiri Mgbochi Usoro Okwu Mmalite
Usoro nrụgide mmiri dị elu bụ sistemụ ọkụ na-enweghị atụ. A na-amanye mmiri site na micro nozzles na nnukwu nrụgide iji mepụta mmiri alụlụ na nkesa ọkụ ọkụ kachasị dị irè. Mmetụta na-emenyụ na-enye nchebe dị mma site na obi jụrụ, n'ihi ọkụ ọkụ, na ịbịnye n'ihi mgbasa nke mmiri site na oge 1,700 mgbe ọ na-ekpochapụ.
1.3.1 Isi akụrụngwa
Akpan-e mmiri alụlụ nozzles
The elu nsogbu mmiri alụlụ nozzles dabeere na Usoro nke pụrụ iche Micro nozzles. N'ihi ụdị pụrụ iche ha, mmiri na-enweta ngagharị siri ike n'ime ụlọ gbara gburugburu ma na-agbanwe ngwa ngwa ghọọ alụlụ mmiri nke na-agbanye n'ime ọkụ na oke ọsọ. The nnukwu ịgba n'akuku na ịgba ụkpụrụ nke Micro nozzles enyere a elu spacing.
A na-eji ụmụ irighiri mmiri ndị e guzobere n'isi isi mee ihe site na iji ogwe nrụgide 100-120.
Mgbe usoro ọkụ ọkụ siri ike dị ka nke ọma yana usoro nyocha na nke akụrụngwa, a na-arụ ọrụ nozzles ahụ maka ikuku mmiri. Nlere nyocha nke ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ya na-eme nyocha niile ka ọbụlagodi ihe siri ike ịchọrọ maka mmiri ga-emezu.
Nnyocha siri ike emeela ka ịmepụta mgbapụta ọkụ ọkụ kachasị n'ụwa. Mgbapụta bụ nfuli multi-axial pistin mere na corrosion eguzogide igwe anaghị agba nchara. Designdị pụrụ iche na-eji mmiri eme ihe dị ka mmanu mmanu, nke pụtara na ịchọ ọrụ na dochie ihe mmanu adịghị mkpa. A na-echebe mgbapụta site na patent ụwa ma jiri ya mee ihe n'ọtụtụ mpaghara dị iche iche. The nfuli-enye ruo 95% ume arụmọrụ na nnọọ obere pulsation, si otú mbenata mkpọtụ.
Ukwuu corrosion-àmà valves
A na-eme ka valvụ dị elu site na igwe anaghị agba nchara ma bụrụ nke na-egbochi corrosion na unyi na-eguzogide ọgwụ. Ihe eji emepụta ihe dị iche iche na-eme ka valvụ ndị ahụ bụrụ kọmpat, nke mere ka ọ dịrị ha mfe ịwụnye ma rụọ ọrụ.
1.3.2 Abamuru nke elu nsogbu mmiri alụlụ usoro
The uru nke elu nsogbu mmiri alụlụ usoro bụ nnukwu. Chịkwa / ịkwụsị ọkụ na sekọnd, na-enweghị iji ihe mgbakwunye kemịkalụ na obere mmiri nke mmiri na nso mmiri na-enweghị mmerụ ahụ, ọ bụ otu n'ime usoro ọkụ ọkụ na-agba gburugburu ebe obibi na arụmọrụ kachasị mma, ọ dịkwa mma maka ụmụ mmadụ.
Opekempe eji mmiri
• Obere mmiri mebiri
• Obere mmebi na ihe a na-atụghị anya nke ịmalite ịmalite ihe mberede
• Obere mkpa maka usoro ihe omume
• Ihe bara uru ebe ọ bụ iwu na ị ga-ejide mmiri
• Ọ na-adịkarịghị mkpa isi mmiri
• Nchedo mpaghara na-enye gị ngwa ngwa ọkụ ọkụ
• Obere oge n'ihi ọkụ na mbibi mmiri
• Belata ihe ize ndụ nke ịhapụ mbak ahịa, ebe ọ bụ na mmepụta na-agba ọsọ ma na-agba ọsọ ọzọ
• Oru oma - dikwa maka iku oku na oku
• Belata ụgwọ mmiri ma ọ bụ ụtụ isi
Obere igwe anaghị agba nchara
• Mfe iji wụnye
• Mfe ijikwa
• Mmezi n'efu
• Mara mma imewe maka mfe incorporation
• Ịdị mma Dị elu
• Ọdịdị dị elu
• eri-irè na mpempe-arụ ọrụ
• Pịa dabara adaba maka ngwa ngwa
• Ọ dị mfe ịchọta ụlọ maka ọkpọkọ
• Ọ dị mfe iji weghachite
• Mfe gbagọrọ agbagọ
• Ọ bụ ihe ole na ole ka ọ dị mkpa
• Ike jụrụ oyi na-eme ka ntinye windo iko dị n'ọnụ ụzọ ọkụ
• Ọgba dị elu
• Ole na ole nozzles - ụkpụrụ ụlọ mara mma
• Oru oma zuru oke
• Ohere windo - na-enyere aka ịzụta nke iko dị ọnụ ala
• Short nwụnye oge
• Aesthetic imewe
1. FM Class 5560 - Factory Mutual Nkwado maka Water alụlụ Systems
2. NFPA 750 - mbipụta 2010
2 Nhazi usoro na akụrụngwa
2.1 Okwu Mbido
Usoro HPWM ga-enwe ọtụtụ nozzles jikọtara site na igwe anaghị agba nchara na mmiri mmiri dị elu (ngalaba mgbapụta).
HPWM nozzles bụ nkenke engineered ngwaọrụ, e mere na-adabere na usoro ngwa iji napụta a mmiri alụlụ ihapu na ụdị na-ana achi achi ọkụ suppression, akara ma ọ bụ extinguish.
2.3 Ngalaba valves - Mepee nozulu usoro
A na-enye valvụ ọkụ nke ngalaba sistemụ ọkụ ọkụ mmiri iji kewaa ọkụ ọkụ ọkụ n'otu n'otu.
A na-enye valvụ nke arụpụtara nke igwe anaghị agba nchara maka ngalaba nke ọ bụla ka echekwaa ya maka itinye ya n’ime sistemu ọkpọkọ. A na-emechi valvụ ngalaba ahụ ma meghee mgbe usoro mkpochapu ọkụ na-arụ ọrụ.
Enwere ike ịhazi ndokwa valvụ ngalaba n'otu ihe dị iche iche, wee tinye pipụ nke ọ bụla na nozzles dị iche iche. A pụkwara ịnye valvụ ngalaba ahụ maka iwepu ya n'ime sistemu ọkpọkọ na ebe kwesịrị ekwesị.
Ogwe ngalaba ahụ ga-adị na mpụga ime ụlọ echedoro ma ọ bụrụ na ụkpụrụ, iwu mba ma ọ bụ ndị ọchịchị ekwughi ndị ọzọ.
Ngalaba valves sizing na-adabere na nke ọ bụla n'otu n'otu ngalaba imewe ikike.
A na-enye valvụ ngalaba sistemụ dị ka valve elektrik arụ ọrụ. Mpempe akwụkwọ ngalaba na-arụ ọrụ na-achọkarị akara ngosi 230 VAC maka ọrụ.
A na-agbakọta valvụ ahụ na mgba ọkụ nrụgide na valvụ iche. Nhọrọ iji nyochaa valves dị iche iche dịkwa yana ndị ọzọ dị iche iche.
2.4 Mgbapụta nkeji
Mgbapụta unit ga-ahụkarị na-arụ ọrụ n'etiti 100 mmanya na 140 mmanya na otu mgbapụta eruba udu rangara 100l / min. Usoro mgbapụta nwere ike iji otu ma ọ bụ karịa mgbapụta nkeji ejikọtara site na ọtụtụ na sistemụ mmiri iji mezuo usoro achọrọ.
2.4.1 Nfuli eletrik
Mgbe usoro ihe a na-arụ ọrụ, ọ bụ naanị otu mgbapụta ka a ga-amalite. Maka sistemụ na-etinye ihe karịrị otu mgbapụta, nfuli ga-amalite n'usoro. Okwesiri ka nrughari na abawanye n'ihi mmeghe nke ihe nozzles; ndị ọzọ mgbapụta (s) ga-akpaghị aka na-amalite. Naanị ọtụtụ nfuli dị ka ihe dị mkpa iji mee ka ọnụọgụ ahụ na nrụgide ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile na usoro usoro ga-arụ ọrụ. Igwe nrụgide mmiri dị elu na-anọgide na-arụ ọrụ ruo mgbe ndị ọrụ ruru eru ma ọ bụ ndị ọrụ ọkụ na-eji aka mechie usoro ahụ.
Pumpkpụrụ mgbapụta ọkọlọtọ
Mgbapụta ahụ bụ otu ngwugwu skid jikọtara ọnụ nke mgbakọ ndị a:
Ihe nzacha Nchekwa nchekwa (Dabere na ntinye mmiri na ụdị mgbapụta)
Tank tojupụtara na ọkwa ọkwa Ntinye ụgbọ mmiri
Return anwụrụ (nwere ike na uru na-eduga na tinyekwa) Inlet manifold
Mmiri akara manifold HP mgbapụta unit (s)
Electric moto (s) Nrụgide nrụgide
Pilot mgbapụta Ogwe njikwa
The moto Starter akara panel dị ka ọkọlọtọ n'ịnyịnya na mgbapụta unit. Achọrọ onye mgbapụta mgbapụta ka ekwenye FM.
Ike ọkọnọ dị ka ọkọlọtọ: 3x400V, 50 Hz.
The mgbapụta (s) bụ kpọmkwem na akara malitere dị ka ọkọlọtọ. Start-Delta amalite, nro mmalite na ugboro Ntụgharị malite nwere ike nyere dị ka nhọrọ ma ọ bụrụ na belata belata ugbu a dị mkpa.
Ọ bụrụ na ndị mgbapụta unit mejupụtara ihe karịrị otu mgbapụta, a oge akara nke nta nke nta njikọ nke nfuli ka ẹkenam iji nweta a kacha nta nke na-amalite ibu.
Ogwe njikwa nwere RAL 7032 ọkọlọtọ ngwụcha yana akara nchedo ingress nke IP54.
Malite nfuli na-enweta dị ka ndị a:
Sistemụ kpọrọ nkụ- Site na kọntaktị mgbaàmà na-enweghị volt na-enye na ogwe njikwa usoro nchọpụta ọkụ.
Wet system - Site na nkedo na nrụgide na sistemụ, na-enyocha site na ngalaba mgbapụta moto njikwa.
Usoro ihe emere - Achọrọ ihe ngosi site na nkwụsị nke nrụgide ikuku na sistemụ na kọntaktị mgbaàmà na-enweghị volt na-enye na ogwe njikwa usoro nyocha ọkụ.
2.5 Ozi, tebụl na eserese
A ghaghị ilebara anya pụrụ iche iji zere ihe mgbochi mgbe ị na-emepụta sistemụ mmiri, ọkachasị mgbe ị na-eji obere mmiri, obere obere ụmụ irighiri mmiri dị ka arụmọrụ ha ga-emetụta nke ọma. Nke a bụ n'ihi na a na-enweta njupụta mmụba ahụ (site na nhụjuanya ndị a) site na ikuku ọgba aghara n'ime ụlọ na-ekwe ka alụlụ ahụ gbasaa ọbụna n'ime oghere - ọ bụrụ na mgbochi dị ugbu a, alụlụ ahụ agaghị enwe ike iru njupụta ya n'ime ụlọ ahụ. dị ka ọ ga-atụgharị ghọọ nnukwu mmiri mgbe ọ na-agbachi na mgbochi na ntapu kama ịgbasa n'ofe n'ime oghere.
Ogo na anya nke igbochi na-adabere n'ụdị nozulu. Enwere ike ịchọta ihe ọmụma na mpempe akwụkwọ data maka ihe ngosi a kapịrị ọnụ.
Fig 2.1 Nozulu
2.5.2 mgbapụta unit
Standard mgbapụta unit na akara obubọk
Mgbapụta otu ibu
kg ihe ruru
Ike: 3 x 400VAC 50Hz 1480 rpm.
Fig 2.2 mgbapụta Unit
2.5.3 mgbakọ valvụ dị iche iche
A na-egosi mgbakọ valvụ dị n'okpuru n'okpuru 3.3.
A na-akwado mgbakọ valvụ a maka usoro ọtụtụ ngalaba na-eri site na otu mmiri. Nhazi a ga - ekwe ka ngalaba ndị ọzọ nọgide na - arụ ọrụ ebe a na - arụzi ya n'otu ngalaba.
Fig 2.3 - Nchịkọta valvụ nke ngalaba - Akọrọ Pipe Sistemụ na Mepee Nozzles
Nke gara aga: Nnukwu mmiri na-eme ka ọkụ na-ere ọkụ (2.2)